Vavaka famelan-keloka alohan'ny nitory ny tenin'Andriamanitra | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka famelan-keloka alohan'ny nitory ny tenin'Andriamanitra
Asan'ny Apostoly 6: 7:
7 Ary nitombo ny tenin 'Andriamanitra; ary nihamaro indrindra ny isan'ireo mpianatra tany Jerosalema; ary nisy antokona mpisorona lehibe nankato ny finoana.
The tenin'Andriamanitra no tariby velona amin'ny kristiana rehetra. Ny tenin 'Andriamanitra dia sakafo ara-panahy izay ahafahantsika mitombo amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Androany isika dia handeha amin'ny vavaka fanelanelanana alohan'ny hitory ny tenin'Andriamanitra. Ity vavaka fanelanelanana ity dia ny hivavahana ho an'ny pasitera, mba hanaterana tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiangonany. izany vavaka fanelanelanana tokony hatao ho an'ny mpino ao amin'ny sahan'ny misiônera mitory ny tenin'i Kristy amin'ny fanahy very. Tsy maintsy mivavaka isika fa amin'ny maha-ministera ny mpanota ny fitiavan'i Jesosy Kristy, dia aoka ho voaheloka amin'ny fahotany izy ireo ary hanaiky an'i Jesosy ho Tompony sy mpamonjy azy.
Raha te hahita goavambe isika famonjena amin'ireo fanahy ao amin'ny fiangonantsika sy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy maintsy mifona isika fa ny tenin'Andriamanitra dia hanana làlana malalaka ary homem-boninahitra eo anivontsika, 2 Tesaloniana 3: 1. Raha vao vaovao ny tenin 'Andriamanitra dia hivondrona hatrany ny vahoaka, ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly 13:44, saika ny tao an-tanàna nitangorona hihaino ny tenin'Andriamanitra. Mety hitranga amin'ny alalan'ny herin'ny vavaka fanelanelanana ihany izany. Noho izany, tsy maintsy mitsangana isika ary mifona ho an'ireo pasitera, evanjelista ary misionera ato amintsika. Tsy maintsy mivavaka isika mba hanomezan'Andriamanitra azy ireo amin'ny teny tsy manam-paharoa rehefa mitory ny teny izy ireo, tsy maintsy mivavaka isika fa raha mitory ny tenin'Andriamanitra ny teniny, dia avelao Andriamanitra hanamafy ny teniny avy am-bava misy famantarana sy fahagagana, izay hitondra famonjena ho an'ny fanahy be any. ny fanjakan'Andriamanitra.
Ry sakaiza malala, mamporisika anao aho hiaraka amin'ireto vavaka fanelanelanana ity anio, ndao hifampidera amin'ny finiavana isika, toy ny ataontsika, ho hitantsika fa manao asa mahery Andriamanitra amin'ny teniny amin'izao andro farany izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
1. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao noho ny nandefasanao ny Teninao tamin-kery nandritra ny taona maro, ka izany no nahatonga ity Fiangonana ity ho kijana maitso izay ameloman'ireo olomasina.
2. Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny Teninao nirahina hivoaka hiala amin'ny alitaran'ity Fiangonana ity, ka hiteraka fanasitranana sy fanafahana amin'ny fanompoana rehetra mandritra ity taona ity.
3. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ny Teninao amin-kery amin'ny fanompoana rehetra mandritra ny taona, ka manao ity Fiangonana ity dia ahitra maitso izay amelom-boly azy ireo tsara.
4. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ranonoranao amin'ny Teninao ny herinao izay hametraka ny fanapahana ny olo-masina amin'ity taona ity.
5. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ranonorana ny Teny manangona anao izay manangona ny tanàna iray manontolo amin'ity taona ity.
6. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ny orana amin'ny Teninao miasa mahagaga, ka mamolavola olona marobe ao amin'ity Fiangonana ity amin'ity taona ity.
7. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ranonoranao amin'ny Teninao fahendrena izay manisy fiatoana tsy manam-petra, ka mahasarika olona marobe ao amin'ity Fiangonana ity amin'ity taona ity.
8. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ranonorana avy amin'ny Teninao manazava ny fiainanao izay hametraka ny fanapahantsika eo amin'ny fahefan'ny maizina mandritra ity taona ity.
9. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ranonorana amin'ny Teninao fahamarinana izay manamasina, ka manatanjaka ny fiainantsika ara-panahy amin'ny ambaratonga manaraka amin'ity taona ity.
10. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ranonorana ny Teninao mamelona aina amin'ity taona ity izay hametraka ny fifehezantsika ny aretina sy ny aretina, ka mahatonga ny vahoaka ho any amin'ny fanjakana.
11. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa anay ny Teninao ao anatin'ny farafara faran'ity taona ity, mankany amin'ny fivoaran'ny fipoahana amin'ity Fiangonana ity.
12. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny herin'ny Teninao, amboary ireo olom-pinoana vaovao rehetra ato amin'ity finoana ity sy amin'ity Fiangonana ity amin'ity taona ity.
13. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny vady rehetra an'ny mpivady ho potipotika
herin ny Teninao eo anivonay ho Fiangonana amin'ity taona ity.
14. Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hitombo mahery ny Teninao eo anivontsika amin'ity taona ity, ka hanangana ny fanapahantsika eto an-tany amin'ny maha-Fiangonana antsika sy antsika tsirairay.
15. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ranonorana ny teninao tsara izay hanamboatra fampitana hafahafa eo amin'ny olonao amin'ity taona ity.
16. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohiza aminay ny ranon'ny Teninao Mandrakizay izay hametraka ny fanapahana isaky ny Mpandresy amin'ity taona ity.
17. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ny ranon'ny Fahasoavanao hatrany mandritra ity taona ity izay hampiditra ny lova isaky ny mpandresy.
18. Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny Fanahinao, omeo fahalalàna tsy manam-pahaizana amin'ny Teny amin'ny mpikambana rehetra ato amin'ity Fiangonana ity, ka niafara amin'ny fihodinana tsy hita maso teo amin'ny fiainan'ny Mpandresy rehetra tamin'ity taona ity.
19. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy handefa anay ny afon'ny Teninao handoro ny amponga rehetra amin'ny fiainan'ny mpikambana ato amin'ity fiangonana ity mandritra ity taona ity.
20. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa anay ny Teninao misintaka izay hanokatra toko vaovao ho an'ireo mpikambana ato amin'ity fiangonana ity mandritra ny taona.
21. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa anay ny Teninao mamelona aina izay handany ny fahafatesana amin'ny fandresena amin'ny fiainan'ny mpikambana ato amin'ity fiangonana ity mandritra ny taona.
22. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny herin'ny Fanahy Masina, dia manohy mandefa amintsika ny Teny ara-paminaniana izay hamerina ny fahamendrehana manavotra ny mpivavaka rehetra mandritra ity taona ity.
23. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manapa-kevitra izahay ny famotsorana ny Teny vaovao sy manova ny fiainana amin'ny fanompoana rehetra ataontsika, izay hanangona sy hitazona olona marobe ao amin'ity Fiangonana ity mandritra ny taona.
24. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa ranonorana ny Teninao manova ny fiainanao, ka mametraka ireo olom-baovao sy olom-baovao vaovao ato am-pinoana sy ato amin'ity Fiangonana ity mandritra ny taona.
25. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao homena ny pasitera ny tenin'Andriamnitra, mitarika ny fitomboan'ny hery ambony indrindra ato amin'ity Fiangonana ity mandritra ny taona.
26. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hisy fitohy mitohy ny Teny amin'ny alàlan'ireo pasitera ato amin'ity taona ity, ka mitondra ny fiantraikany amin'ny heriny eo amin'ny fiainan'ny mpikambana rehetra.
27. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, avelao hisy fitomboan'ny Teny hatrany amin'ny alitarantsika mandritra izao taona izao, ka hampitombo ny fitomboan'ny fitomboana ity Fiangonana ity.
28. Raiko, amin'ny anaran'i Jesosy, manambara ny Teny marina amin'ny olonao amin'ny fanompoana rehetra mandritra ity taona ity, ka mitondra fijoroana ho vavolom-bava maro ho an'ny mpivavaka rehetra.
29. Ray, amin'ny anaran'i Jesosy, manohy mandefa anay ny Teninao isaky ny vanim-potoana mandritra ny fanompoana mandritra ity taona ity, ka mitondra fitsaharana ho an'ny mpivavaka rehetra.
30. Ray ô, amin'ny anaran'i Jesosy sy ny Fanahy Masina, avelao ny Teninao hanana lalana malalaka ary hankalazaina eo anivontsika amin'ny famantarana sy fahagagana mandritra ity taona ity.
Previous lahatsoratraVavaka famelan-keloka ho an'ny fitoriana ny filazantsara
Next lahatsoratraVavaka Famelomana avy amin'ny fanekena mampidi-doza
Luís Jiménez 21 Febroary 2021 Amin'ny 12:47 maraina
Tena ilaina izany
Hevitra vavaka fisaorana ho an'ny taona vaovao 2021
34 Ny laharam-bavaka mba hahombiazana amin'ny fanompoana
Andinin-Baiboly 10 hivavahana rehefa maniry ny hamela heloka isika